Dilal ka dhacay Maanta Magaalada Muqdisho;? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dilal ka dhacay Maanta Magaalada Muqdisho;?
Dilal ka dhacay Maanta Magaalada Muqdisho;?
Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda Federaalka gaar ahaan Minishiibiyada ayaa si bareer cad ah waxa uu degmada Shangaani ee Gobolka Banaadir ugu toogtay nin dhalinyaro ah oo wade ka ahaa Mooto Bajaaj.
Dilka ninka dhalinyarada ah ayaa yimid kadib markii Askariga iyo isaga ay ku murmeen sida la sheegay lacag canshuur ah, intaasi kadibna ay xigtay Rasaas Askariga uu la dhacay widihii Mooto Bajaajta, oo uu kala beegsaday Madaxa.
Taliyaha Saldhigga degmada Shangaani oo si hoose ula hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay Askariga, nin kale oo la socday iyo Bastooladii uu dilka ku geytay.
“Askari ka tirsan Ciidanka Minishiibiyada ayaa Qof Mooto Bajaajle ah wuxuu ku dilay meel aan sidaas uga fogeyn saldhiga degmada, Askariga iyo nin kale oo la socday ayaan gacanta ku dhignay”. Ayuu yiri Taliyaha saldhiga degmada Shangaani.
Dhanka kale koox hubeysan ayaa duhurnimadan waxa ay suuqa Bakaaraha ku dileen Askari ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya, sida ay Warbaahinta u sheegeen dadka degaanka.
Dilka Askariga ayaa waxaa geystay koox dhalinyaro ah oo ku hubeysnaa Bastoolado, dilka kadib ayay ka baxsadeen goobta, kahor inta aysan halkaasi soo gaarin Ciidamada Dowladda Federaalka.